तीन लघुकथा श्रृंखला २६ | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित ३ चैत्र २०७७ २२:०४
(प्रदेश नं. १ क्षेत्रको पहिलो महिला लघुकथा कृति)
पवन हाट बजारमा कपडा बेच्ने गर्थ्यो । प्रायः त्यहाँ गाउँघरका मानिसहरु नै ग्राहक थिए । उसले दिनभरिमा थरीथरीका मान्छेहरुसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
पसल फिजाउन साथ एक महिला आएर सोधिन्, “पेन्टी छ ? छ भने कति, कति पर्ने छ दाजु ?”
“माल अनुसारको दाम पर्ने त हो नि! बहिनी ।”
यसो हेरिन् र भनिन्,” यो मलाई हुन्छ कि हुँदैन ।”
“खै बहिनी मैले नापिदिन मिलेन त,” ठट्टा गर्दै भन्यो ।
उसले ग्राहक अनुसारको बोली बोल्नुपर्छ भनेर जानी सकेको थियो । फेरि अर्को बूढो आएर सोधे , “आलु राख्ने बोरा छ बाबु ?”
उसले बुझेरै होला हाँस्दै पेन्टी निकालिदियो । अनि किनेर लगे ।
केहीबेरपछि माघको जाडोमा पनि पातलो सुती साडी लपेटेर खाली खुट्टा महिला करिब दुई वर्ष जतिको बालक चेपेर आइन् । र, सोधिन्, “दाजु यत्रोलाई अट्ने लुगा छ ?”
उसले लुगा निकालिदियो । एक जोड सुट छानेर भनिन्, “यस्को दाम कति होला ?”
“तीन सय पचास हो बैनी । लानुहुन्छ भने तीन सयसम्ममा दिउँला ।”
बच्चालाई काखबाट झारेर भुईमा उभ्याइन् । बच्चाको सुरुवाल सिलाउँदा सिलाउँदा कपडा मक्किएर तुरी देखिन्थ्यो । बाहुला छोटो भएकोले पाखुरामा काँडा उम्रिएको थियो ।
उनले साडीको टुप्पोमा भएको गाठो खोलिन् त्यहाँ दुई सय पचास मात्र थियो ।
“म सँग पैसा पुगेन दाजु । पछि आउँला । भएको जति सबै पैसा बोकिन रहेछु । घरमा नै छुटेछ ।”
बच्चालाई जुरुक्क उठाएर कम्मरमा बोकिन् । अगाडि बढ्न खोजे पनि उनका आँखा भने त्यही कपडामा अल्झिएका थिए ।
यो दृश्य आफ्नो नजरमा कैद गरेको पसलेले भन्यो, “लानुहोस् बैनी ।”
हतार गरेर पैसा भुईंमा राख्दै कपडा लगाई दिई । मुखबाट फुत्काई “आहा! मेरो कालुलाई कति सुहायो । दाजु बाँकी पचास रुपैयाँ आउँदो हटियाको दिन ल्याइदिन्छु है !”
पसलेले भावुक बन्दै भन्यो, “पर्दैन बहिनी । यो एउटा माइतीले आफ्नो भान्जालाई दिएको उपहार हो । यही सम्झिनु ल !”
मनमनै आफ्नी श्रीमती सम्झेर भन्यो, “माफ गरिदेऊ, तिमीलाई दिने प्रेम दिवसको उपहार भन्दा एउटा बालकलाई जाडो छल्ने लुगा उपहार दिनु उचित थियो ।”
(नेपालको प्रदेश नं. १ साहित्यको क्षेत्रमा अग्रणी प्रदेश हो । कथा, नियात्रा, भाषा, व्याकरण र कविताको क्षेत्रमा यो प्रदेश सधैँ अगाडि छ । यसै प्रदेशमा महिला लेखिकाका रूपमा सर्वप्रथम लघुकथा संग्रह प्रकाशन गर्ने लघुकथाकारमा पर्छिन्, उमा सिजापती । उनीले २०७६ सालमा “परी” लघुकथा प्रकाशित गरेकी हुन् ।
उमा सिजापतीको लघुकथा लेखनमा छुट्टै दम छ । उनी भोगाईहरूलाई लघुकथामा सरल तरिकाबाट सजाउँछिन् । यौनका पक्षहरूलाई थाहा नपाउँदो गरी प्रस्तुत गर्छिन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “उपहार” दु:ख र अभावको पृष्ठभूमिमा लेखिएको मन छुने कथा हो । कथाको अन्त्यले पाठकलाई भावुक बनाउँदै मनमा च्वास्स घोच्छ, यही नै कथाकार उमा सिजापतीको सफलता हो ।)
लास रूखमा थियो, त्यसैले हत्याको अड्कल गरियो । पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आइसकेको थिएन । प्रहरीको सहयोगमा ‘क’ समूहका सदस्यहरूले कब्जामा लिई सामुदायिक झन्डा ओढाएर गाउँ घुमाए ।
यो कुरा ‘ख’ समूहलाई सैह्य भएन, उसले लास भोलिपल्ट आफ्नो अधिनमा पार्यो र समुदायको सदस्य भएको उद्घोष गर्दै गाउँ परिक्रमा गरायो ।
यसरी समुदायहरू बीच लासको राजनीति भैरहेको थियो । प्रहरी निरुपाय थिए तर अर्को दिन सदरमुकामबाट आएको एक डफ्फा प्रहरीहरूले लास आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । पछि पनि मृतक आफ्नो धार्मिक समुदायको सदस्य भएको बताउँदै माग्न आउने समूहहरू आधा दर्जन भए । सबै उसले आफ्नो धर्म ग्रहण गरेको कुरा बताइरहेका थिए ।
प्रहरीले लास कसैलाई दिएन । तथापि प्रमुख धार्मिक समुदायहरू उसलाई आ–आफ्नो समुदायको दह्रो सदस्य भएको जिकिर गरिरहेका थिए ।
चौथो दिन प्रहरीको रोहबरमा परिवारका सदस्यहरूले सद्गत् गरे । यसलाई प्रहरीको ज्यादती भन्दै धर्मगुरुहरूले पनि कटु आलोचना गरे ।
त्यसको पर्सिपल्ट पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आयो । रिपोर्टसँगै भएको लामो कागजले सबैको ध्यान आकृष्ट गरायो । त्यहाँ उसले ग्रहण गरेका धार्मिक मतहरूको सङ्ख्या उल्लेख थियो । ती सबैलाई समान दूरीमा राख्दै आफ्नो लास उनीहरूले छुन नपाऊन् भन्ने आशयको पत्र पनि छोडेको थियो ।
”भोको मान्छेले प्रवचन बुझ्दैन, उसलाई खाना चाहिन्छ,” पत्रको अन्त्यमा लेखिएको थियो ।
(नेपाली लघुकथाको विकासक्रममा ५० को दशकलाई सक्रियकाल मानिन्छ । यही समयदेखि लघुकथाकार नवराज रिजाल लघुकथामा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ ।
नवराज रिजाल मूलत: साहित्यिक सम्पादक हुन् । उनीले “प्रज्ञापन” हवाई पत्रिका हुँदै “नवप्रज्ञापन” साहित्यिक पत्रिका निरन्तर सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसो त “नवप्रज्ञापन” साहित्यिक पत्रिकाले २०७३ सालमा लघुकथा प्रकाशन पनि गरेको छ । लघुकथाकार नवराज रिजालको दुईवटा लघुकथा संग्रह प्रकाशनमा छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “भोको मान्छे” ले मान्छेको महत्त्व स्वार्थवस मृत्युपर्यन्त पनि रहिरहने कुरालाई समसामयिक पाराबाट उनेको छ । लघुकथाको बिज वाक्यले भोको मान्छेलाई प्रवचनले छुँदैन भन्ने कुरो श्वास्वत वाक्य बोलेको छ ।)
“के के खायौ?” ।
“अझै भोकै छु!”
“ल हिँड ! भतेर त लाग्दैछ! केहीको इज्जत तिमी लुछ! केही म उधार्नेछु!”
(लघुकथामा “कात्यायन” को आफ्नो विशिष्ट पहिचान छ । धन्वन्तरी मिश्रको नामबाट पनि उनी बेलाबेला साहित्यिक सृजना गरिरहन्छन् । उनी थोरै लेख्छन् तर लेखनमा स्वैरकल्पनाको प्रयोग बढो मज्जाले गर्छन् । शब्दहरूलाई लेखनीमा तौलिएर प्रयोग गर्छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा “भोज” ले वर्तमान समयको नैतिकता, इमानदारिता, लज्जा र इज्जत पतन हुँदै गइरहेको कुरो दर्साएको छ । लघुकथाले सबेको मन छुनु पर्छ ।)
उमा सिजापतीकात्यायनतीन लघुकथातीन लघुकथा शृंखलादीपक लोहनीधन्वन्तरी मिश्रनवराज रिजाल
सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको प्रदेश ६ शाखा गठन
शर्माको अभिनन्दन चैत २२ मा गरिने